Ngamanyathelo ama-4 alula, fundisa ukuba ukhethe ukosula okukhuselekileyo! 1: Jonga izithako kunye nokupakisha. Abazali kufuneka bathenge iipeyinti zomsana ezimanzi kumajelo aqhelekileyo, kwaye kufuneka bazijonge ngononophelo xa bekhetha: Kwizithako zemveliso, kungcono ukhethe iimveliso ezibhalwe ngokucacileyo njengezingenayo ...
Sukukhetha oosula abangalunganga abasetyenziswa ngumntwana wakho yonke imihla!
Emva kokuba nomntwana, iisuli ezimanzi ziye zaba yinto eyimfuneko kusapho. Ingakumbi xa ukhupha usana lwakho, kufanelekile ukuba uluthwale, ungazisula iesile lakho xa usenza ukungcola kwakho, ungasula izandla zosana lwakho ukuba zimdaka, kwaye ungazilahla xa zingcolile, elimina .. .
Uvavanyo lokusula okumanzi okushushu
Njengoko umgangatho wokuphila uya usiba ngcono nangakumbi, umbono wabantu wokukhathalela abantwana uyatshintsha ngokuthe ngcembe, ngakumbi abo bantu batsha bazalwe kwiminyaka ye-80 kunye neye-90 ekufuneka beqwalasele ngakumbi ukubaluleka kobomi. Emehlweni abazali abancinci, isimilo sabantu abadala sisula ...
Izinto ezintle cleaning Ukucoca okukhethekileyo kusula iibhatyi, zithambile kwaye azonzakalisi izandla.
Ngenxa yokuba abantu boyika ukungcola, akunguye wonke umntu onesibindi sokuthenga iimpahla ezinemibala ekhanyayo, ngakumbi ezimhlophe ezimsulwa? Izikhonkwane zeempahla zazimnyama namthubi, kwaye engaqondanga waphakamisa isandla wafumanisa ukuba umjonge ngamehlo alizothe! Xa utshintsha iimpahla, nxiba ...
Ukusula okumanzi okwenziwe nge-100% yomqhaphu kulunge kwaye kuthambile, kufanelekile ukuba uthenge kwakhona ngokungenamda
Ndisebenzisa ukusula okumanzi yonke imihla, kodwa akukho zinto zimbini zindenza ndichukunyiswe. Uninzi lwabo lufana nabantu abadlulayo… akukho luvo lobukho. I-100% yomqhaphu wobuso obucocekileyo osula endikusebenzise kutshanje undinike isimanga sokufumana izinto ezintle. Ukuthambisa, ukunceda ulusu, kwaye ke ...
Utywala osula iintsholongwane, intsholongwane enamandla ngaphandle kokucaphuka, kwaye uthintele iintsholongwane.
Isifundiswa uLi Lanjuan, ilungu leqela leengcali ezikumgangatho ophezulu weKhomishini yezeMpilo yeSizwe, uqinisekisile esidlangalaleni kwinkomfa yoonondaba: “Le coronavirus intsha iyaboyika utywala kwaye ayimelani namaqondo obushushu aphezulu. Ngokwamava angaphambili ane-coronaviruses, ether, 75 ...
Uyikhetha njani into yokusula kosana lwakho olulungileyo？
Ukusula iintsana kunokuthiwa yinto ekufuneka yenziwe xa usiya ekhaya. Kufuneka utshintshe ilweyile losana lwakho kwaye usule izandla nomlomo. Nangona ukusula kosana kuthathwa njenge "ezisetyenziswayo", zisetyenziselwa ukucoca, kodwa ukuba ufuna ukuzikhetha ngononophelo, zikhona ...
Ukucoca iinwele entlonzeni
NgeyoMnga ngo-2020, NGCONO wasungula iinwele ezintsha kunye nokusula kwentloko yesikhumba. It is a non-amayeza ezesula ezilahlwayo. Iisuli ezimanzi ziqukethe izondlo ezifunekayo kwizinwele, ezaneleyo ukugcina iinwele zakho ziqaqambile usuku, kwaye ususe ngokufanelekileyo ukungcola kunye neoyile egqithisileyo entlonzeni. ...
Usapho lwemihla ngemihla isilwanyana esicocekileyo nesicocekileyo
NGCONO ukhuphe usapho olutsha olusula izilwanyana. Ubungakanani bephepha lephepha likhulu ngokwaneleyo. Oku kusula kumanzi kwenziwa ngezinto zendalo. Inobuhlobo, ikhuselekile kwaye ayinabungozi kwizilwanyana zasekhaya. Eyona nto isula inja ngamehlo yinja ...
Ubhubhane usaqhubeka. Le yimfazwe apho wonke umntu ethatha inxaxheba kodwa akukho mpu. Ukongeza ekuxhaseni umgca wangaphambili kangangoko banako, abantu abaqhelekileyo kufuneka bazikhusele kwaye bathintele usulelo, bathintele ubhubhane ukuba ungenzeki ...
Umnyhadala wonyaka wokuthenga weLazada 9.9 wasungulwa ngokusesikweni kumazwe amathandathu mpuma Asiya. Ukwahluka kwiminyaka edlulileyo, uLazada wabhengeza ngokusesikweni uhlaziyo olutsha lwevenkile yakhe ephambili yeLazMall, ngexesha lomnyhadala we-9.9 wokuthenga kulo nyaka. Nceda ii-brand, abathengisi kunye nabagunyazisiweyo ...
Kwi-2020, ilizwe lingene kwidabi eliphambili lokulwa ne-COVID-19
Kwi-2020, ilizwe lingene kwidabi eliphambili lokulwa ne-COVID-19. Eli dabi lide kunokuba bekulindelwe. Ngo-Okthobha, NGCONO wasungula isibulala-magciwane esitsha kunye nokusula kwe-antibacterial. Le F&U isula intsholongwane xa isula iqulethe ikhonkco eline-quaternary ammonium s ...
Sukukhetha okusula okungalunganga okuba ...
Uvavanyo lokusula okumanzi okumanzi: ezi wi ...
Izinto ezilungileyo ｜ Ukucoca okukhethekileyo ukusula i-d ...
Ukusula okumanzi okwenziwe nge-100% yomqhaphu kulusu ...